Tony dia nandray anjara tamin’ny famolavolana, famokarana, fanofanana ary fampiasana nandritra ny taona maro i Tony. Manana traikefa be dia be izy amin’ny sehatry ny NHS sy ny OEM. Niasa tamin’ny sehatry ny indostria ihany koa izy, izay nizara ny andraikiny tamin’ny fametrahana fiofanana ho an’ny mpamokatra lehibe manerantany. Taorinan’ny faniriany mihombo hampiasa ny fahaizany manampy amin’ny LMIC’s, izy sy ny vady aman-janany dia nanao asa an-tsitrapo ho an’ny ONG manerantany nandritra ny 11 taona, indrindra any Afrika Andrefana. Rehefa tafaverina izy dia faly fa afaka nanohy ny fitiavany hanohana ny fitsaboana ara-pahasalamana Afrikana miaraka amin’ny MedAid, miaraka amin’ny fiofanana momba ny biomédical an-tserasera mivoatra, ary miara-miasa amin’ny ekipa MedAid iray manontolo hitadiavana vahaolana sahaza ho an’ny mpanjifanay. Izy koa dia nanampy tamin’ny fakana santionany ireo biscuits an’ny birao, voalaza fa manonitra ny tsy fananany menaka fanamoriana nandritra ny fotoana naha tany Afrika!